अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै : जिग्री भन्छन यस्तो बेला हास्ने की रुने ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारअभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै : जिग्री भन्छन यस्तो बेला हास्ने की रुने !
१० बैशाख २०७८, शुक्रबार काठमाडौं – हाँस्य टे’लसिरियल भ’द्रगोल र स’क्कीगोनीबाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्ने तयारीमा छिन् । उनि आमा बन्न लागेको कलाकार कुमार कट्टेल ले बताएका छन् ।
कुमार कट्टेल जिग्रिले एउटा फेसबुक स्टाटस हा’ल्दै भनेका छन् ‘यस्ताे बेलामा हाँस्ने की रुने , हामी सबैको प्या’री रक्षा अामा बन्दै । लामो समय देखि हाँस्य टेलसिरियल र म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेकी रक्षा ग’र्भ’व’ती भएकै कारण कलाकारिताबाट ब्रे’क लिने बताइएको छ ।
अघिसम्मकी ‘मोडल रक्षा श्रेष्ठ’ अहिले ‘भद्रगोलकी रक्षा’को नामले प’रिचित छन् ।विगत डेढ वर्षदेखि हास्य टेलिशृंखला भद्रगोलमा आ’वद्ध भएपछि उनको परिचय फे’रिएको हो । परिचय मात्र फेरिएको छैन, उनको चर्चा पनि चु’लिएको छ । हुन त भ’द्रगोलमा आउनुअघि उनले दुई दर्जनभन्दा बढी विज्ञापनमा मोडलिङ गरिसकेका थिइन् ।
केही म्युजिक भिडियो र र्याम मो’डलिङमा पनि उनको जा’दु चलेको थियो ।उनी अब पुनः प्रशारण हुन लागेको ‘स’क्किगोनि’ मा नदेखिन सक्ने बताइएको छ । सुटुक्क विबाह गरेकी रक्षा आमा बन्न लागेको कुरा हालै एक युट्युव अन्तरवार्तामा स’क्कीगो नी टि’मले खुलाएका थिए ।